Qor si aad u akhrido
Saaxiib ayaa hadda kuu soo diray a email ku saabsan shir aad yeelanayso saacad gudaheed. Iimaylku waa inuu ka kooban yahay macluumaadka muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad soo bandhigto, taasoo qayb ka ah mashruuc muhiim ah.
Laakiin waxaa jira dhibaatooyin: boostada si xun ayaa loo qoray si aadan u helin macluumaadka aad u baahan tahay. Waxaa jira fiilooyin higgaadin iyo jumlado aan dhamaystirneyn. Qormooyinka waa muddo dheer oo aad u jahwareersan oo aad u baahan tahay saddex jeer ka dheer intii loo baahnaa si aad u hesho macluumaadka aad rabto. Natiijo ahaan, adiga ayaa diyaar u ah kulanku mana u socdo si siman sida aad rabto.
Weligaa ma waxaad la kulantay xaalad sidan oo kale ah? In adduun weyn oo macluumaad ah, waa lagama maarmaan in si cad, si xariir ah oo si wax ku ool ah ula xiriiraan. Dadku ma haystaan ​​wakhti ay ku akhriyaan e-waraaqaha dhererka buugta, mana haystaan ​​dulqaadka tarjumada e-mailka liita ee aan dhisi karin iyo halka macluumaadka faa'iidada leh ay meel walba ku kala firdhaan.
Wixii kale xirfadaha qorista way fiicnaanayaan, marka aad wax badan dareentid naftaada, oo ay ku jiraan madaxaaga, asxaabta, iyo macaamiisha. Marnaba ma ogaan kartid ilaa inta farqiyeyaashani ay kuu horseedi doonaan.
Maqaalkan, waxaan arki doonaa sida aad u hagaajin karto xirfadahaaga qorista iyo ka fogow khaladaadka caanka ah.
Maqalka iyo qaabka
Tallaabada ugu horreysa ee si cad loo qoro waa in la doorto habka ku habboon. Ma u baahan tahay inaad dirto emayl aan rasmi ahayn? Qoraan warbixin faahfaahsan? Ama qor warqad rasmi ah?
Qaabka, iyo sidoo kale dhagaystayaashaada, ayaa qeexi doona "codkaaga wax qorista" - taasi waa, sida rasmiga ama dabacsanaanta codka u noqon lahaa. Tusaale ahaan, haddii aad email u qoreyso macaamiil macquul ah, ma inuu lahaadaa mid la mid ah emaylka saaxiibkiis?
Dhab ahaan ma aha.
Ku billow aqoonsiga cidda aqrin doonta farriintaada. Ma waxaa loogu talagalay maareeyayaasha sare, kooxda oo dhan, ama koox yar oo ka shaqeysa feyl gaar ah? Wax kasta oo aad qorto, akhristayaashaada, ama kuwa ku qaata, waa inay qeexaan codkaaga iyo sidoo kale dhinacyada nuxurka.
READ Qorshaha qoraalka emailka ah ee waxtarka leh
Qaabdhismeedka iyo qaabka
Markaad ogaatid waxaad qoraysid iyo cidda aad qoraysid, waa inaad bilowdaa qoraal.
Shaashadda kumbuyuutarka ee madow, ayaa badanaa ku hanjabta. Way fududahay in la xayiro sababtoo ah ma ogid sidii aad u bilaabi lahayd. Isku day talooyinkan adigoo ku dhejinaya iyo qaabeynta dukumiintigaaga:
Ka bilow dhagaystayaashaadaHa iloobin in akhristayaashaada aysan wax ka ogaan waxa aad u sheegto. Maxay ugu baahan yihiin inay marka hore ogaadaan?
Qorshee qorsheTani waxay faa'iido gaar ah leedahay haddii aad qoraysid dukumiinti dheer, sida warbixin, bandhig, ama hadal. Mowduucyada waxay kaa caawinayaan inaad gartaan talaabooyinka lagu raacayo nidaamka iyo kala qaybinta hawsha xogta la hayo.
Isku day wax yar oo naxariis lehTusaale ahaan, haddii aad ku qorayso email iib ah macaamiisha suurtagal ah, maxaad u daryeeshaa alaabtaada ama goobta iibka? Waa maxay faa'iidada ay u leeyihiin? Xasuuso baahiyaha dhagaystayaashaada mar walba.
Isticmaal sadex-xagal-jilicsanaanHaddii aad isku dayayso inaad ku qanciso qof inuu wax sameeyo, hubso inaad sharaxdo sababta ay dadku u dhegeystaan, u fariistaan ​​fariintaada si aad ula qabsato dhagaystayaashaada, una soo bandhigtid macluumaad habboon oo haboon.
Aqoonsiga mawduucaaga muhiimka ah: Haddii ay kugu adagtahay inaad qeexdo mawduuca ugu muhiimsan ee farriintaada, iska dhig inaad haysatid seconds sanadeedka 15 si aad u sharaxdo goobtaada. Maxaad dhahdaa? Tani waa malaha muhiimka ah.
Isticmaal luqad cad: Haddii aan qoraallada qoraalka la qorin, guud ahaan waa fiican tahay in la isticmaalo luqad fudud, luqad toos ah. Ha isticmaalin ereyada dhaadheer oo kaliya si aad u soo jiiddo dadka.
Dukumeentigaagu waa inuu ahaado mid si sahlan u isticmaalaya. Isticmaal xarfaha, subtitles, hubka iyo tirooyinka inta ugu badan ee suurtagal ah si aad u kala saartaan qoraalka.
Ka dib marka la eego, maxay kuu sahlan tahay inaad akhrido: bogga oo buuxiyey cutubyada dheer ama bog oo u qaybsan cutubyo gaaban oo leh qaybta qaybta iyo xabbado? Dukumeenti fududeynaya in la baaro ayaa badanaa la aqriyaa inta badan dukumiinti oo leh waqti dheer, cufnaanta cufan.
Madaxdu waa inay ku qabtaan dareenka akhristaha. Iyada oo la adeegsanayo su'aalaha, badanaa waa fikrad fiican, gaar ahaan qoraalada xayaysiinta, sababtoo ah su'aaluhu waxay sii wadaan akhristaha xiisaha iyo xiisaha leh.
Ku soo dir e-mail iyo soo jeedin, isticmaal xarafyo gaaban, xaqiiqda dhabta ah iyo subtitles, sida kuwa ku jira qodobkan.
Ku darida sawirrada ayaa sidoo kale ah habka ugu wanaagsan ee lagu kala saari karo qoraalkaaga. Qalabkaas muuqaalkani ma aha oo keliya inuu akhristaha u oggolaado in uu fiiro gaar ah u yeelo content, laakiin sidoo kale wuxuu u gudbiyaa macluumaadka muhiimka ah sida ugu dhakhsaha badan qoraalka.
Khaladaad naxwe ahaaneed
Waxaad u badan tahay inaad ogtahay in khaladaadka ku jira iimaylkaagu ay shaqadaada ka dhigayaan mid aan xirfad u lahayn. Waa lagama maarmaan in laga fogaado khaladaadka waaweyn adoo helaya higaad sixid iyo dib u eegida higaadaada sida ugu macquulsan.
Halkan waxaa ku qoran tusaalooyin ereyada caadiga ah ee la isticmaalo:
Waan diraa / diraa / kuu diraa
Fikradda "loo diro" ficilka kooxdii koowaad, mid ayaa had iyo jeer ku qori doona qofka ugu horreeya ee keli ah "waxaan dirayaa" oo leh "e". "Gaadiid" la'aan "e" waa magac ("shixnad") waxayna noqon kartaa jamac ah "shipments".
Waxaan kugu soo biirayaa / aan ku biiray
Mid ayaa had iyo jeer qori doona "Waxaan kugu soo biirayaa" oo leh "s". "Wadajirka" oo leh "t" waa isku xidhka qofka saddexaad ee ku qoran "uu ku biiro".
Xitaa haddii "boomeriye" lagu magacaabo magac dumar ah, ha ku siinin jarribaan, had iyo jeer qor "qummane" iyadoon "e".
Talo soo jeedin / talo bixin
Haddii Ingiriisi aan ku qorno "talo" oo leh "e", Faransiiska waxaan had iyo jeer qornaa "talo" oo leh "a".
Miyuu jiraa / yahay / yahay
Waxaan ku darnaa euphonic "t" qaaciddooyinka su'aalaha si loo fududeeyo ku dhawaaqida loona ka hortago laba shaqal oo is xigxiga. Waxaan haddaba ku qori doonnaa "ma jiraa".
Marka la eego / marka la eego
Midna weligiis ma qori "marka la eego" iyadoo aan "s" ahayn. Xaqiiqdii marwalba waxaa jira "shuruudaha" isticmaalka dareenkan.
READ Sidee loo kobciyaa mid ka mid ah awooda xukunka?
Ka digtoonow inaan lagu khaldamin ereyga "marka laga reebo" kaas oo ku dhammaanaya "s". Midna weligaa ma qori karo "dhex" oo leh "s". Waa udubdhexaad ah, waana mid gaaban.
Sida lagu heshiiyey / sida lagu heshiiyey
Xitaa waxaa lagu dhajiyay magaca haweenka, "sida lagu heshiiyey" marwalba waa la isku marin karaa mana walwalayn "e".
Dayactir / adeeg
Ha dhexgelin magaca iyo falka. Magaca "wareysiga" iyada oo aan "t" lagu qeexayo isbeddel ama "wareysi shaqo". Fikradda isku dhafka ah ee qofka saddexaad ee ka mid ah "joogtaynta" waxaa loo adeegsadaa marka ay timaaddo waxqabadka ilaalinta wax.
Qaar ka mid ah akhristayaashaada kuma koobnaan doonaan hingaad iyo naxwe ahaan. Waxaa laga yaabaa inaysan ogaan haddii aad qaladkan sameyso. Laakiin ha u isticmaalin arintan sabab la'aan: waxaa jiri doona dad, gaar ahaan madaxda sare, oo ogaan doona!
Sababtan darteed, wax kasta oo aad ku qorto waa inay ahaataa tayada la aqbali karo dhammaan akhristayaasha.
Cadaalad darro fiican ayaa ah xawaare. Dad badan ayaa u dhaqaajiya si ay u xajiyaan emailkooda, laakiin taasi waa sida aad u khaldan tahay. Raac tilmaamahan si aad u calaamadiso wixii aad ku qortay:
Eeg cinwaankaaga iyo cagahaaga: Dadku badanaa iska dhaga tiraan inay diiradda saaraan qoraalka. Tani ma aha sababtoo ah madaxa waa baruur iyo baruur in ay ka madax banaan yihiin khaladaadka!
Akhri emailka kor ku xusan: Tani waxay ku qasabtahay inaad gaabisid, taas oo macnaheedu yahay in aad u badan tahay inaad ogaato khaladaadka.
Isticmaal fartaada si aad u raacdo qoraalka sida aad u akhrido: Waa arrin kale oo kaa caawineysa inaad hoos u dhigto.
Ka bilaw dhamaadka qoraalkaaga: Dib u akhri jumlada ilaa dhammaadka ilaa bilowgii, waxay kaa caawineysaa inaad diirada saarto qaladaadka iyo ma aha content.
Hagaajinta xirfadahaaga qorista May 10th, 2020Tranquillus
horeSidee loo qoraa emayl cad oo xirfad leh?
socdaMarka wajiga wejiga uu ka fiican yahay emailka